चुरापोते र मेहन्दीको आडम्बर |
चुरापोते र मेहन्दीको आडम्बर
प्रकाशित मिति :2016-07-27 11:37:14
पितृसत्तालाई पक्षपोषण गर्ने यस्तो कुसंस्कृती हामीले आफै वरिष्कार गर्न सक्नुपर्छ । साउनमा हरियो पहिरन र चुरापोते, व्रत र मेहन्दी पितृसत्ताकै प्रतीक हुन् ।
‘सँगै पढ्ने रजनीले साउनमा सँधै हरियो चुरा लगाउँथी । उसले पोहोर राम्रो केटा पाएर विहे गरी । त्यसैले मैले पनि लगाएकी हुँ ।’ नेपाल मानविकी क्याम्पसमा विए दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत रचनाले हातभरी हरियो चुरा लगाउनुको रहस्य खोलिन् । उनी मात्र होइन राम्रो जीवन साथी पाउने आशामा यसरी महिनाभरी चुरा लगाउनेको संख्या बढ्दो छ ।
महिला मेहन्दी, हरियो, पहेँलो चुरा र हरियो कपडा लगाएर साउन महिनाभरि विभिन्न मन्दिर धाउने गर्छन् । परापूर्व कालमा पार्वतीले कठोर व्रत बसेर महादेव पति पाएको भन्ने मिथकलाई २१ औंं शताव्दीका महिलाले समेत पछ्याइरहेका छन् । साउनको हरेक सोमबार व्रत बसेपछि अविवाहितले राम्रो पति पाउने विश्वास छ भने विवाहितले व्रत बस्दा पतिको लामो आयु हुने विश्वास छ । यो अवधीमा महत्वपूर्ण काम छोडेर महिला विभिन्न मन्दिर धाउने गर्छन् । तर यो मान्यता आडम्बर मात्र हो । विगत केही वर्षयदेखि तडकभडकका साथ सुरु भएको यो संस्कृतिले पछिल्लो समयमा विकृति फैलाएको प्रष्टै देखिन्छ ।
हरेक संस्कृति एउटा रौनक लिएर आउँछ र विकृतिमा पुगेर टुंगिन्छ । अनी लामो समयसम्म त्यही विकृतीले संस्कृतिको नाममा निरन्तरता पाइरहन्छ । हरियो पहिरन, पोते, चुरा र मेहन्दी यसैका प्रतीक हुन् । गतवर्षहरू जस्तै यस वर्षको साउन लाग्ना साथै धेरै महिलाका हातमा हरियो र पहेँलो मिसिएको चुरा र गलामा पोते देखिए । कतिपयलाई सोध्दा कसैले जवाफ दिन्छन् ‘मन लाग्यो लगाएँ ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी रेक्टर प्राध्यापक डाक्टर सुधा त्रिपाठी यो परम्परालाई देखासिकीको संज्ञा दिन्छिन् । उनी भन्छिन् ‘ केही समय अगाडिदेखि मात्रै सहरमा यस्तो दृश्य देखिन थालेको हो । एउटाले लगाएको देखेर अर्कोले लगाइरहेका छन् । पितृसत्तालाई पक्षपोषण गर्ने यस्तो कुसंस्कृती हामीले आफै वरिष्कार गर्न सक्नुपर्छ । साउनमा हरियो पहिरन र चुरापोते, व्रत र मेहन्दी पितृसत्ताकै प्रतीक हुन् ।’
मन लाग्छ वा राम्रो देखिन लगाउने हो भने साउनमै किन लगाउनु प¥यो ? प्रश्नको जवाफ छैन । हाम्रो समाजका महिलामा यस्तो कुसंस्कारले जरो गाडेको छ । यतिसम्म की, देशको मूल कानून बनाउन अग्रसर कतिपय महिला सांसदको गलामा पनि हरियो पोते र नाडीमा हरियो चुरा देखिन्छ । यसबाट रहेक महिलामाथि हुने गरेको विभिन्न प्रकारका हिंसाविरुद्ध आवाज बुलन्द बनाउन गएका ती महिलाको महिलामूखी कानून बनाउन कस्तो भूमिका रहन्छ ?
त्यस्तो सामन्तवादी संस्कृतिको आ–आफ्नै उत्पतिका इतिहास पनि छन् । सन्दर्भ हरियो पहेंलो चुरा पोते र मेहन्दीको मात्रै होइन । तीज, कृष्ण अष्टमीलगायतका चाडवाडमा पनि महिलाले विना संकोच व्रत बस्ने, मठमन्दिर धाउने र पूजापाठ गर्ने गर्छन् । साउनमा हरियो चुरा पोते मेहन्दी महिना भरि लगाउने चलन कस्ले कहाँबाट चलायो त्यसको बारेमा सबैमा अन्यौल नै छ । अन्यौलमै महिला पैसा र समय खर्चिरहेका छन् । यसबाट व्यापारीलाई कमाउने मौका त मिलेको छ नै । महिलाको आर्थिक अवस्था कमजोर बनाइदिएको छ । खाइ नखाइ दुःख गरेर उत्पादन गरेको दुध बेचेको पैसाले रक्सी खाएर श्रीमती कुट्ने श्रीमानको आयु लम्ब्याउन व्यस्त महिला घरबाट निस्केर आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर कहिले होलान् ?
हरियो चुरासँगै पहेँलो चुरा र हरियो पोतेसँग पहेलो पोते मिसाएर लगाएकी डिल्लीबजार कन्या क्याम्पसकी जमुनका अनुसार हरियो श्रीमानका लागि र पहेँलो भगवान शिवका लागि हो । तर उनलाई त्यसबारेमा अरु केही पनि थाहाँ छैन । उनी सबैले लगाएरको देखेर आफूले पनि लगाएको बताउँछिन् । समाजमा जसले जे हल्ला चलायो त्यसैको पछि दौडने संस्कार छ । हरियो, पहेलो चुरा पोतेको मात्र होइन साउनमा हातमा मेहन्दी लगाउने चलनले त झन् बच्चादेखि वृद्धासम्म जरो गाडिसकेको छ । हातमा मेहन्दी लगाएमा वर्षभरि निरोगी बनिन्छ भन्ने मिथ्या कथनबाट प्रभावित भएर मेहन्दी लगाउने बढेका छन् । चुरा, पोतेसँगै मेहन्दीमा समेत ती महिलाले पैसा खर्चिरहेका छन् । भारतीय संस्कृति अनुसार मेहन्दी विवाहका दिन दुलहीले शृङ्गारको रुपमा प्रयोग गर्छन् । त्यही चलनको देखासिकी गरेर नेपालका बालबच्चा, तन्नेरी वृद्धा सबै बेहुली बनिरहेका छन् ।
चुरापोते र मेहन्दी यसै पनि सामन्ती संस्कारका प्रतीक हुन् । एक डोरो पोते र एउटा चुराले आम नेपाली महिलाले कति पीडा खेप्नुपरेको छ भन्ने उदाहरण खोज्न टाढा जानुपर्दैन । परम्परावादी संस्कृतिमा महिलालाई विवाहको दिन श्रीमाने सिउँदोमा राखिदिएको सिन्दुर, लगनका बेला लगाइ दिएको पोते र चुराले जीवन भरि बन्धनमा राख्छ ।
एउटी नारी विहे गरेदेखि श्रीमानको लामो आयुका लागि चुरा र पोतेमा सजिएर बस्नु पर्ने परम्परा लोकतन्त्रमा पनि कायमै छ । सदियौँ देखि पितृसत्तात्मक समाजमा रहेको यस प्रकारको कुरीति लोकतन्त्रमा आउँदासम्म पनि हट्न नसक्नुले राजनीतिक परिवर्तन भए पनि सामन्तवादको जरो नउखेलिएको यस्ता संस्कृतिले प्रष्ट्याउँछन् ।
उहिले उहिलेका महिला शिक्षा र चेतनाका अभावमा पितृसत्ताले सिर्जना गरेका यस्ता कुपरम्परा अंगाल्न बाध्य थिए भने अहिलेका शिक्षित महिलालाई रहर भएको छ । चार पाँच वर्ष देखि शुरु भएको हरियो र पँहेलो चुरा, पोते रातो हरियो पहिरन र मेहन्दीको लहरले त्यस्तै संस्कृतिलाइ सघाउ पुर्‍याएको छ । जवसम्म यस्ता आडम्बर संस्कारबाट माथि उठ्न सकिँदैन तवसम्म समान हक र अधिकारको उपयोगबाट टाढै रहिनेछ ।